China Factory Cheap Price Diamond Nail Drill Bit Nail Art Manicure Salon fekitori uye vatengesi |Yaqin
Chii chinonzi diamond chipikiri chekubooresa?
Diamond chipikiri chibooresasiyana muhukuru kazhinji mumamilimita, nekushanda chikamu saizi kubva 1mm kusvika 6mm.Saizi yebhiti ndiyo inonyanya kukosha kune manicurists, hukuru hukuru hunopa iyo manicurist chikamu chekushanda kuita manicure.
Colors: Sirivha, Muraravungu
Grits: Kubva pane yakanaka kusvika kune yakaoma: F (yakanaka) M (pakati) C (yakakora)
Kurema Approx.6.0g / 0.2oz
Ruoko Rudzi: Zvakajairwa kuruoko rweruboshwe nekurudyi
Craft Advantage: Kupenya kwakatsetseka, Kudzivirirwa kwezvakatipoteredza, Hunhu hwepamusoro uye antibacterial, Usakuvadza ganda
Kushandisa: Kuchengeta runako, Kukuya pamusoro, kupukuta, Kubvisa macalluses
Zvimiro zvedhaimani chipikiri drill bit?
Diamond chipikiri chibooresayakagadzirirwa kushandiswa munzvimbo dzakaoma dzekusvika, uye kubatsira kubvisa chero mhenyu matishu enzvimbo yecuticle, uye kubatsira kubvisa yakafa tishu yenzvimbo yecuticle.
Maumbirwo akasiyana edhaimani chipikiri drill bit
Diamond chipikiri chibooresaine maumbirwo akasiyana-siyana, tsananguro dzinotevera dzichakuudza kuti ndezvipi misiyano uye kushandiswa pakati pechimiro chemurazvo uye chimiro chebhora.
-flame: Ichi chimiro ndechimwe chinonyanya kufarirwa pakati pedhaimondi mbambo burrs, Izvo zvose zvinoshandiswa kubatsira zvishoma kusimudza cuticle kubva pahwendefa rembambo uye kubvumira kuti zvive nyore kubvisa cuticle uye gel polish kushandiswa.Inoshandiswa pakugadzirisa rutivi rwembambo masvingo, kuputika.Kureba kwechikamu chekushanda ndeye 8 mm.
-bhora: Bhoradiamondi chipikiri chibooresandiwo mamwe emhando dzakakurumbira.Ichi chimiro chebhiti chinoshandiswa pakubvisa cuticle mushure mekunge gel polish yabviswa uye cuticle yakasimudzwa zvishoma kubva pahwendefa rembambo.
Zvakanakira zvedu zvedhaimani chipikiri drill bit?
Kushandisa zvakanyanya: Inokodzera manicure pamwe ne pedicure, uye yehunyanzvi studio yekushandisa kana kushandiswa kwemba.
Mabheti edu anoita zvakanaka, haapise, anoburitsa huruva shoma, vatengi vedu vanoda kutipa mhinduro yakanaka nekutidhaimondi chipikiri chibooresohaiti ngura kana kuburitsa kupisa, izvi zvinovapa kunzwa kwakasiyana kwekushandiswa.
Zvakapfuura: Wholesale Manicure Pedicure Ceramic Nail Drill Bit For Nail Drill
Zvinotevera: Kupisa Kutengesa Nylon Nail Brush For Sale
Diamond Diki Spherical Nail Drill Bit
Dhaimondi-Russian Nail Drill Bits